विखण्डनकारीलाई सुरक्षा थ्रेटः को-कोबाट सीके राउत असुरक्षित ? | Citizen Post News
काठमाडौं । मार्च ८ अर्थात फागुन २४ गतेका दिन विखण्डनकारी कथित डा.सीके राउत (स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन) र सरकारबीच ११ बूँदे सहमति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' ले गरे । सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई लक्ष्य गर्दै कम्युनिष्टको बर्को ओढेर जनतामा लुट नगर्न चेतावनी दिए ।
उनले त्यस्ता कामले कम्युनिष्ट पार्टीको बदनाम हुने भएकाले सो पार्टीलाई नाम परिवर्तन गर्न पनि सुझाव दिए । उनले भने,'शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न बम पड्काउने, टुट्ने र घरमा बन्दुक राख्नेहरुलाई सरकारले खानतलासी गरी कारवाही गर्छ ।' प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिबाट आक्रोशित नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव' माओवादीले ३० गते नेपाल बन्दको घोषणा गरिसकेको छ ।
विखण्डनकारी राउतसँग हात मिलाएको सरकारले विप्लव माओवादीलाई भने भड्काउने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश पनि बढेको छ । अर्कोतिर, विखण्डनकारी राउतलाई सुरक्षा थ्रेट भएको भन्दै सरकारले नै सुरक्षा दिने घोषणा गर्नुको पछाडि आखिर रहस्य के हो ? सर्वसाधारण जनताले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैनन । राज्य विप्लव मुद्दामा जेलमा सडिरहेको एउटा शक्तिहिन ब्यक्तिलाई बाहिर निकाल्दै उनको सुरक्षाका लागि सरकारले प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) दर्जाका एक जुनियर प्रहरी अधिकृत खटाएको छ, त्यो पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो निर्देशनमा ।
विखण्डनकारी राउतलाई दिइएको अंगरक्षक गृहमन्त्रालयले सीधै प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमार्फत व्यवस्था गरेको हो । शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित सहमति घोषणासभामा समेत राउत अंगरक्षककै साथमा थिए । प्रहरी मुख्यालयले भने विखण्डनकारी राउतलाई उपलब्ध गराएको अंगरक्षकप्रति अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।
राउतलाई कसको र किन सुरक्षा थ्रेट छ ?
प्रदेश नम्बर दुईमा अहिले विशेषगरी राजपाको हालीमुहाली रहेको छ । राजपाबाटै निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई टीकापुर हत्या काण्डमा जिल्ला अदालत कैलालीले २२ गते जन्मकैदको फैसला सुनायो । लगत्तै राजपाले पार्टीको आकस्मिक बैठक डाकेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । तराई मधेशमा राउत राजपाका लागि चुनौती बनिरहेका थिए । लगत्तै सर्वोच्च अदालतले किटानी जाहेरीवाला नभएको, दशीप्रमाण नपुगेको भन्दै विखण्डनकारी राउतलाई २३ गते अर्थात विहिबार रिहा गर्यो ।
पर्सिपल्ट अर्थात शुक्रबार सरकार र राउतबीच राजनीतिक सहमति भयो । राउतले सहमति गर्दै मुलधारको राजनीतिमा आउने बताइरहँदा उनको नियत भने विखण्डनकारी नै देखियो । मधेशमा अब जनमतबाट छुट्टै राज्यको स्थापना हुने भन्दै दीपावली मनाउने क्रम जारी छ । तराई मधेशमा अबको राजनीतिक भिडन्त राउत, राजपा र फोरमबीच हुनेछ । त्यसो हुँदा राजपा र फोरमको अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित छ । राउतलाई राजनीतिक, ब्यक्तिगत रुपमा पनि राजपा र फोरमबाट सुरक्षा थ्रेट हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अर्को प्रमुख कारण राउतको एजेण्डाः
मधेश स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा निर्माण गर्ने अभियानमा रहेका विखण्डनकारी राउतले लिएको एजेण्डा नै गलत छ, थियो र हुनेछ । सामाजिक सञ्जालमा उनलाई इन्काउण्टर गर्न माग गर्ने युवाको जमात लाखौंको छ । त्यतिमात्र होइन, कसैले उनलाई मार्न सकेको खण्डमा आर्थिक सहयोग गर्ने दसामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरलगायतमा शभक्त नागरिकले खुलेर लेखेका छन् ।
एकताका राउतलाई नेपाल आर्मीले नै इन्काउण्टर गर्ने सूचना पठाएपछि केही समय उनी शान्त बसेका थिए । नेपाल प्रहरीमा पनि राउतको कदम र मागले तराईमा सुरक्षा थ्रेट जन्माएको भन्दै निकै आक्रोश बढेको थियो । सर्वसाधारण जनताले नै खुलेआम हत्या गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला सुरक्षा थ्रेट महसुस भएको हुनसक्छ । अन्यको कारण भन्दा पनि विखण्डनकारी राउतले बोकेको एजेण्डाका कारण नै देशभक्त नेपालीको निशानामा पक्कै पनि उनी परेका हुनसक्छन् ।
सरकारले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव माओवादीलाई उत्तेजित पार्ने काम गरिरहेको छ । हैसियत नै नभएका हतियारधारी शक्तिसँग बार्ता गर्दै विप्लवलाई वेवास्ता गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले विप्लव माओवादीलाई गर्ने ब्यवहार हिजोको माओवादीलाई गर्ने ब्यवहार अर्थात आतंकवादी शैलीको छ । मुलुकभरबाट उसका कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ गरिएको छ ।
उसलाई राजनीतिक शक्तिका रुपमा ब्यवहार नै गरिएको छैन । कारण-नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको बहकाउमा प्रधानमन्त्री ओली लाग्नु । विखण्डनकारी राउतसँग सम्झौता गदैैगर्दा विप्लवलाई उत्तेजित पार्दा भड्कीएको विप्लव माओवादीबाट पनि सीके राउतलाई खतरा हुनसक्छ ।